Angry Birds Action!: Nguva ino vanomhanya, havabhururuka | IPhone nhau
Angry Birds Action!: Nguva ino vanomhanya, havabhururuka
Vachauraya sei hanzi inokandira mazai egoridhe? Shiri Dzinotsamwa ndeimwe yemasaga akabudirira pane akasiyana mapuratifomu mairi. Kutanga ivo vakatanga nerudzi rwemutambo uyo watove wechinyakare umo isu taifanirwa kushandisa shiri sekunge kuti yaive bara kubva pachifuramabwe, ipapo vamwe vakaita seAngry Birds Go vakasvika uye zvino chasvika paApp Store. Shiri Dzinotsamwa!.
Asi chii chinonzi Angry Birds Action!? Zvakanaka, ini ndingati zvakangofanana nemutambo wepakutanga, asi panguva imwechete zvakatosiyana. Izvo zvakafanana nekuti isu tichafanirwa kudaro dhonza shiri yakatsamwa kuti uwane simba uye kusunungura kuivhura. Izvo zvakasiyana zvachose nekuti, kutanga, mune ino nyowani sitendi isu hatisi kuona zvese mune yepanyika 2D mufananidzo. Mukutsamwa kweshiri! Isu tinoona zvese kubva kumusoro uye protagonist haibhururuka, asi inomhanya.
Angry Birds Action! Zvakafanana, asi zvakasiyana zvachose
Chinangwa chedu ndechekununura mazai akapararira padanho rega rega. Iyo shiri yakatsamwa yatinofanirwa kudzora haisi yekuti ine yakanyanya kukwirisa njere dzekugadzira, saka isu tichafanirwa kuishandisa sekunge raive bhiridha bhora uye kumuita kuti abvise zvipingamupinyi zvakasiyana kuitira kuti trajectory yake iponese huwandu hwemazai. Semamwe mune Angry Shiri mitambo, mune Angry Birds Action! tichawana mamwe mabheji kana tikashandisa zvishoma kufamba.
Kana ndichifanira kuva akatendeseka, pandakaziva kuti Rovio anga atanga mumwe mutambo nezve ake akatsamwa shiri, ndakafunga kuti yaive imwezve, asi iyi inoita kwandiri kuti ipe mweya wemhepo mutsva ungangodaro wakakodzera. Uye zvakare, kuyedza hakutipe isu chero chinhu, sezvo mutambo ndezvemahara nekutenga-mukati-app. Ehezve, kwandiri ine chikanganiso: haisi muchiSpanish. Wakambozviedza here? Ko izvi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Angry Birds Action!: Nguva ino vanomhanya, havabhururuka
Apple Music yeApple inogamuchira rutsigiro rwemavhidhiyo uye account yemhuri
Carl Icahn anotengesa ese ake Apple share